नेपालगञ्ज रंगशाला प्रदेश सरकारलाई ‘ह्यान्डओभर’ गर्नुपर्छः सदस्यसचिव विष्ट (अन्तर्वार्ता) - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नेपालगञ्ज रंगशाला प्रदेश सरकारलाई ‘ह्यान्डओभर’ गर्नुपर्छः सदस्यसचिव विष्ट (अन्तर्वार्ता)
नेपालगञ्ज बैशाख १२
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सरकारले प्रदेश ५ मा एक अर्ब बढीका संरचनाहरु निर्माण ग¥यो। नेपालगञ्ज रंगशाला, खजुराको शुक्र भलिबल रंगशाला, नेपालगञ्जमै सुटिङ रेन्ज, पौडी पोखरी, भारोत्तोलन एकेडेमी, जुडो हल निर्माण तथा स्तरोन्नति भए।
आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता बुधबार विधिवत् रुपमा सम्पन्न भएपछि अब यी संरचनाको सञ्चालन, संवद्र्धन र संरक्षण कसले गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ। समापनको एक दिनअघि मात्रै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशम्शेर राणाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती संरचनाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पत्र आए आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले पनि बनेका संरचनाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको जिम्मा अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँछन्। प्रस्तुत छ, बुधबार आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समापनपछि सदस्यसचिव विष्टसँग नेपालखबरका यज्ञराज जोशीले नेपालगञ्जमा गरेको कुराकानीः
समग्रमा आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?
आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता दुई वर्षभित्र विवादरहित ढंगबाट भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नु निकै ठूलो चुनौती थियो। त्यो चुनौतीलाई मैले र मेरो टिमले सामना गर्न सफल भयौं। दुई वर्षभित्रै एनआरएनएसहित अहिलेसम्मकै बढी टिमहरु भएको प्रतियोगिता पूर्बाधारहरु बनाएरै सम्पन्न गर्नु गौरवको विषय हो। यसले अब नवौं, दशौं आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन्छन् अनि यो भन्दा बढी व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने पनि विश्वास पलाएको छ। सबैको साथ र सहयोगले हामी प्रतियोगिता आयोजना गर्न सफल भयौँ।
तपाईंकै कार्यकालमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भएका थुप्रै भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय कमजोरी यसपटक पनि दोहोरिए नि?
हामीले यसपटक धेरै पूर्वाधारहरु बनायौं। सातौंमा हामीले ७०–८० लाखमात्रै खर्च गरेका थियौं भने यसपटक झण्डै १ अर्बभन्दामाथि खर्च ग¥यौ। पूर्वाधारमा यसपटक ठूलो उपलब्धि भयो। सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेटको हो। बजेटको समस्या सातौंमा जे थियो अहिले पनि त्यही छ। आजका मितिसम्म पनि आयोजना गर्ने ११ करोड रुपैयाँ आइपुगेको छैन्। पूर्वाधारमा अझै पनि १५–१६ करोड खर्च गर्नुपर्नेछ, त्यो पनि आइसक्या छैन। बजेटको समस्या, निर्णय ढिलो हुने समस्या छन्। यी हाम्रा आन्तरिक कुरा भए। जे होस हामीले आयोजना सफल पा¥यौँ। यो नै ठूलो उपलब्धि हो।
नेपालगञ्ज उपमहानगरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यहाँका संरचनाहरु जिम्मा पाए लिन आफू तयार रहेको बताएको छ। के यी संरचनाहरु स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिन सम्भव छ?
अहिले यसबारे निर्णय भएको छैन् तर मेरो विचारमा यो नेपालगञ्ज कम्प्लेक्स चाहिँ उपमहानगरलाई हैन प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ। अरु जुन कभर्डहरु छन् ती संरचनाहरु चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। र, उहाँहरुले त्यसको संरक्षण, संवद्र्धन र स्तरोन्नतिको काम गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले पनि केही बजेट दिन्छौं उहाँहरुले पनि केही बजेट हाल्नुपर्छ। त्यो ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। तर, यो नेपालगञ्जको रंगशाला चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हामीले ‘ह्यान्डओभर’ गर्नुपर्छ।
आठौं प्रतियोगिताका क्रममा तपाईंलाई एकदमै खुसी लागेको क्षण कुन हो?
मलाई एकदमै खुसी लागेको क्षण चाहिँ हामीले जुन उद्घाटन गरौं। ओलम्पिक टर्च बाल्दाखेरि राष्ट्रपति ज्यूले अब राष्ट्रिय खेलकुद शुभारम्भ भयो भन्दाको क्षण म एकदमै खुसी भएको थिए। त्यसबेला मैले खेलाडीहरुलाई सम्झेँ, मेरो आँखामा आसु आयो। खेलाडीलाई व्यग्र प्रतीक्षा थियो कि दुई वर्षमा आयोजना भइदिएको भए आफ्नो प्रतिभा देखाउँन पाउथ्यौं भन्ने। कति खेलाडीहरु समयमै प्रतियोगिता नभईदिँदा पलायन भएका छन्। हामीले प्रतियोगिता नियमित रुपमा आयोजना गरेर खेलाडीको पलायन रोक्ने वातावरण सृृजना गरेका छौं। उनीहरुमा आशा पलाएको छ।
तपाई खुसी भइरहँदा खेलाडीहरु त प्रतियोगिताबाट त्यति खुसी देखिएनन् नि?
खेलाडी अत्यन्तै प्रशन्न छन्, खुसी छन्। अलिअलि हामीले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्‌‌यो भने चाहिँ उनीहरुमा प¥यो। विगतमाभन्दा राम्रो भएको छ। भनेको जस्तो त कसलाई पुग्छ र? ओलम्पिक आयोजना गर्दा, विश्वकप आयोजना गर्दा पनि कतिपय कमिकमजोरी हुन्छन्। हाम्रो बजेट र साधन स्रोत अनि परिस्थितिलाई हेर्दा हामीले अधिकतम् रुपमा यसलाई भव्य गरायौं र राम्रो गरायौं भन्ने लाग्छ।
खेलाडीलाई व्यवसायिक रुपमा राम्रो सेवासुविधा दिँदै अनि राम्रा पूर्वाधारहरुमा व्यवस्थित रुपमा राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हामी कहिले पुग्छौं?
यो सरकारको दृष्टिकोणमा भर पर्छ। सरकारले खेलकुदलाई हेर्ने र बुझ्ने कुरामा भरपर्छ। विगतभन्दा राम्रो हुँदै गएको छ। मलाई लाग्छ, यो अझै पर्याप्त छैन्। नवौंमा खेलाडीहरु व्यवसायिक रुपमा उत्रँदै राम्रो पूर्वाधारमा खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म यसवर्षको बजेटमै यसलाई सम्बोधन गर्न माग पनि गर्छु। मलाई विश्वास छ नवौं, दशौंसम्म पुग्दासम्म हामीले व्यवस्थित ढंगबाट राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नसक्छौं होला।
असारदेखि तपाईंको कार्यकाल सकिँदैछ। दुईवटा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछिे पुनः सदस्यसचिवमा दोहोरिने इच्छा पनि होला नि?
हाम्रो नियुक्ति भनेको राजनीतिक नियुक्ति हो। राजनीतिक नियुक्ति भनेको सम्बन्धित पार्टीले जिम्मेवारी दिने कुरा हो। जिम्मेवारी यदि मलाई दियो भने मैले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी दिएन भने म अन्य भूमिकामा हुन सक्छु। मैले आजसम्म लिएका जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट भएको छु। युवा संघमा काम गर्दाखेरि म नगरको, जिल्लाको उत्कृष्ट भएको थिए। आजसम्म जुन जिम्मेवारी मैले सम्हाले त्यसमा म उत्कृष्ट र प्रथम भएकाे छु। यो जिम्मेवारी(सदस्यसचिव) पुनः मैले सम्हाले पाए भने आगामी प्रतियोगिता अझै उत्कृष्ट र भव्य बनाउँछु। नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मै सदस्यसचिव रहेभने दुईवर्ष मै यो(आठौं) भन्दा धेरै उत्कृष्ट ढंगले आयोजना गर्छु।
प्रकाशित १२ बैशाख २०७६, बिहिबार | 2019-04-25 13:02:30